Myanmar eStay (Official Government Website)
Apply eStay Extension
eBusiness Visa Stay Extension
1. A stay extension/ re-entry visa application foraforeigner working inacompany or engaging in the businesses associated withacompany must be submitted by an existing company duly incorporated and registered at the Directorate of Investment and Company Administration (DICA) andaDirector of that company. The company and the director must be registered and listed in the Myanmar Companies Online (MyCO) directory.
2. If the company’s status in the Myanmar Companies Online (MyCO) directory is not registered, the application will be rejected.
3. An extension requisition letter with the company letterhead shall be signed by one of the directors of the company as listed on MyCO and the said letter must be attached to the application.
4. The latest Entry Visa must be an eVisa (Business).
5. Those who have originally obtained an eVisa (Tourist) but have since changed toabusiness visa type will not be able to apply.
6. Those who have originally obtained an eVisa (Business) but have since changed toadifferent visa type and obtainedastay extension/re-entry visa will not be able to apply.
7. Passport used for the stay extension application must havearemaining validity of at least (6) six months. Stay extension beyond the validity of the passport is not allowed. Single or Multiple Re-entry Visa can be applied along with the stay extension application if it is intended to leave and re-enter the country during the stay validity period.
8. The foreigner for whom the application is made must be present in the country for the entire duration from the initial application up to the affixture of the relevant stickers.
9. Processing fees shall be paid online using Visa, Master, JCB within (3) days from the date of payment notification email which will be sent upon approval of stay extension and re-entry visa.
Processing Fees are as below_
3-month stay permit 62 USD
6-month stay permit 114 USD
1-year stay permit 217 USD
Single Re-entry Visa 72 USD
Multiple Re-entry Visa 217 USD
10. Processing fees collected online are for Stay Extension/ Re-entry Visa only and exclude Overstay fines and fees for Foreigner Registration Certificate.
11. If the application is made after an authorized stay period is over, overstay fines shall be paid in cash in accordance with the rate below at the cash counter, Stay Extension Section located at No. 122, Pansodan Street, Kyautada Township, Yangon, prior to the affixture of approved Stay/ Re-entry visa sticker.
USD3per day for overstay period of (1) to (90) days
USD5per day for overstay period of over (90) days
12. If the foreigner for whom the stay extension/ re-entry application is made is in possession ofavalid Foreigner Registration Certificate, it must be attached with the application.
Otherwise, he/ she must apply for it at the Foreigner Registration Section located at No. 122, Pansodan Street, Kyautada Township, Yangon, prior to the affixture of approved Stay/ Re-entry visa sticker.
For Foreigner Registration Certificate Application or Renewal, the fees must be paid in cash in accordance with the procedures at the Foreigner Registration Section and Cash Counter located at No. 122, Pansodan Street, Kyautada Township, Yangon.
13. In the event the concerned foreigner is unable to be present in person, an authorization letter with the company letter head signed by one of the directors of the company listed on MyCO must be presented.
14. According to the Ministry’s Letter No. 200/ ga (1092)/ lapana dated 20-10-2014, stay extension/ re-entry visa application fees and overstay fines are exempted for children who are under the age of (7) years during the length of the stay extension applied for.
A Proof-of-age-under (7) years must be submitted.
၁။ နေခွင့်သက်တမ်းတိုး/ ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA) ၌ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားပြီး Myanmar Company Online (MyCO) Registered တွင်ပါရှိသည့် တည်ဆဲကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်းကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာစာရင်းတွင် ပါရှိသော ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဦးက မိမိကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား (သို့မဟုတ်) မိမိကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်စပ်၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံခြားသားအတွက် တာဝန်ယူ/တာဝန်ခံ၍ လျှောက်ထားပေးရမည်။
၂။ အထက်ပါကုမ္ပဏီသည် Myanmar Company Online (MyCO)တွင် Registered အခြေအနေတွင်မရှိပါက လျှောက်ထားမှုကို ငြင်းပယ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ Myanmar Company Online (MyCO) ၌ ဖော်ပြထားသည့် ၎င်းကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာစာရင်းတွင် ပါရှိသော ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဦးက ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါရှိသော နေခွင့်သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါစာကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
၄။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နောက်ဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့သည့် ဗီဇာသည် eVisa (Business) ဖြစ်ရမည်။
၅။ eVisa (Tourist) ရယူထားပြီး Business Visa သို့ပြောင်းလဲထားသူများ ဤစနစ်တွင် လျှောက်ထား နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၆။ eVisa (Business) ရယူထားသော်လည်း Business Visa အမျိုးအစားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အခြားဗီဇာအမျိုးအစား တစ်ခုခုသို့ ပြောင်းလဲ၍ နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးနှင့် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ရယူထားပါက ဤစနစ်တွင် လျှောက်ထား နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၇။ နေခွင့်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားမည့်သူ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းသည် အနည်းဆုံး (၆) လ ကျန်ရှိရပါမည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်း ထက်ကျော်လွန်၍ နေခွင့်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခွင့်မပြု။ နေခွင့်သက်တမ်းကာလအတွင်း ပြည်ပသို့ထွက်ခွာပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ရန် ရှိပါက တစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကို တစ်ပါတည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၈။ နေခွင့်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားစဉ်ကာလအတွင်း (စတင်လျှောက်ထားသည့်နေ့မှ ခွင့်ပြုချက်ကျပြီး Visa Sticker များကပ်ပြီးသည့်နေ့အထိ) အဆိုပါ နိုင်ငံခြားသားသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်ရှိနေရပါမည်။
၉။ နေခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတို့ကို Online မှ လျှောက်ထားမှုအားခွင့်ပြုသဖြင့် ငွေပေးချေရန် ဌာနမှ အကြောင်းကြားစာ email ပေးပို့သည့်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ် ကာလ (၃)ရက် အတွင်း VISA, Master, JCB ကဒ်များဖြင့် သတ်မှတ်ကျသင့်ငွေကို ပေးချေရမည်။
လျှောက်ထားသည့် အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
၃ လနေထိုင်ခွင့် 62 USD
၆ လနေထိုင်ခွင့် 114 USD
၁ နှစ်နေထိုင်ခွင့် 217 USD
တစ်ကြိမ်ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ 72 USD
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ 217 USD
၁၀။ Online မှ ကောက်ခံထားသောနှုန်းထားများသည် နေခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်း/ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားခြင်း များအတွက်သာဖြစ်ပြီး နေခွင့်သက်တမ်း ကျော်လွန်ခြင်းအတွက် ပေးဆောင်ရမည့် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးများ၊ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (FRC - Foreigners Registration Certificate) ဆိုင်ရာ ပေးဆောင်ရမည့် သတ်မှတ် အခကြေးငွေများ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၁။ နေခွင့်သက်တမ်းကျော်လွန်နေထိုင်ပြီးမှလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက ကျော်လွန်သည့်ရက်များအတွက် over stay ဒဏ်ကြေးငွေများကို အမှတ် (၁၂၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ နေခွင့်သက်တမ်းတိုးဌာနစိတ်၊ ငွေစာရင်းကောင်တာတွင် အောက်ပါ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ငွေသား (cash) ဖြင့် ခွင့်ပြု Stay/ Re-entry Visa Sticker မကပ်မီ ပေးဆောင်ရမည်-
နေခွင့်သက်တမ်းကျော်လွန်သည့်ကာလ (၁) ရက်မှရက် (၉၀) ထိအတွက် တစ်ရက်လျှင် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေး3USD နှုန်း
ရက်ပေါင်း (၉၀) အထက်ကျော်လွန်သည့် ကာလအတွက် တစ်ရက် လျှင် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေး5USD နှုန်း
၁၂။ နေခွင့်သက်တမ်းတိုး / ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားသူသည် သက်တမ်းရှိသော နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (FRC -Foreigners Registration Certificate) ကိုင်ဆောင်ထားပါက နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (FRC -Foreigners Registration Certificate) လက်မှတ်ကို တစ်ပါတည်း ပူးတွဲ၍ တင်ပြရမည်။
နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (FRC - Foreigners Registration Certificate) ဆောင်ရွက်ထားခြင်း မရှိပါက အမှတ် (၁၂၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် ဌာနစိတ်တွင် ခွင့်ပြု Stay/ Re-entry Visa Sticker မကပ်မီ သွားရောက် လျှောက်ထားရယူရမည်။
နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (FRC - Foreigners Registration Certificate) ကနဦး လျှောက်ထားမှု (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (FRC - Foreigners Registration Certificate) သက်တမ်းတိုးခြင်း အတွက် အမှတ် (၁၂၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရှိ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်ဌာနစိတ်နှင့် ငွေစာရင်းကောင်တာတို့သို့ သွားရောက်၍ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ သတ်မှတ်အခငွေ နှုန်းထားကို ငွေသား (cash) ဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်။
၁၃။ Stay/ Re-entry Visa Sticker လာရောက်ကပ်ချိန်တွင် သက်တမ်းတိုးရယူမည့် နိုင်ငံခြားသားကိုယ်တိုင် မလာနိုင်ပါက လျှောက်ထားပေးသော ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာစာရင်းတွင် ပါရှိသော ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဦးက လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါရှိသော ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ယူဆောင်လာရမည်။
၁၄။ နေခွင့်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရယူမည့်ကာလ အပိုင်းအခြားအတွင်း အသက် (၇) နှစ် မပြည့်သေးသူ နိုင်ငံခြားသား ကလေးများအတွက် နေခွင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း/ ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားခြင်းနှင့် နေခွင့်ကျော်လွန်ခြင်းဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀-၁၀-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂၀၀/ဂ(၁၀၉၂)/လပနအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်‌ပေးသွားမည်။
အသက် (၇) နှစ်အောက် ကလေးဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားဖြင့် တင်ပြရပါမည်။
Official Myanmar eStay
+95 67 3431515
9:30 am to 4:30 pm (GMT +6:30)
Go to eVisa